के खुद्रा विक्रेताहरु फेसबुक मा गोल्ड हडताल गर्न सक्छन्? | Martech Zone
मंगलवार, फेब्रुअरी 9, 2010 मंगलवार, फेब्रुअरी 9, 2010 Douglas Karr
Foresee अनुसार ... हो। अग्रिम आज फेसबुकसँग सम्बन्धित केही खुद्रा तथ्या .्कहरूमा केही खोजहरू जारी गर्दैछ। यहाँ उनीहरूका केहि खोजहरू छन्:
56% shoppers को शीर्ष इ-रिटेल वेबसाइटहरूमा जुन सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ? मित्रको चुनाव भयो? वा? अनुसरण? वा 'सदस्यता लिनुहुन्छ? फेसबुक, ट्विटर र यूट्यूब जस्तै सामाजिक नेटवर्किंग साइटहरूमा एक फुटकर बिक्री लाई। यो ग्राहक संलग्नता र सामाजिक संलग्नता मा चासो को एक अद्भुत प्रमाण हो। खरीदारहरूले वास्तवमा सामाजिक साइटहरूमा खुद्रा विक्रेताहरूसँग सम्बन्ध राख्न रोजिरहेका छन्।
फेसबुक भनेको टाढाबाट पसलहरू पुग्नको लागि उत्तम स्थान हो। आधा बढी जो सबै अनलाइन शपिंग को लागी फेसबुक को उपयोग गर्दछ, र ती अनलाइन शपरहरु को जो सामाजिक मिडिया मा संलग्न छ, %०% भन्दा बढि फेसबुक प्रयोग गर्दछ। यद्यपि शीर्ष १०० अनलाईन रिटेलरहरूको फेसबुक पृष्ठहरूमा अनौपचारिक नजरबाट हेर्ने हो भने एक चौथाईमा कुनै फेसबुक औपचारिक उपस्थिति हुँदैन। अर्को शब्दमा, शीर्ष अनलाइन रिटेलरहरूसँग न्यूनतम अस्तित्व रहेको फेसबुक उपस्थिति छ।
ग्राहकहरू मुख्यतया अन्तर्क्रिया गर्दछन् सामाजिक मिडियामा खुद्रा विक्रेताहरू उत्पादनहरू र पदोन्नतीहरूको बारेमा जान्नको लागि साइटहरू 5% केवल सामाजिक समर्थनका लागि ग्राहक समर्थनका लागि? एक बजारको सपना साकार हुन्छन्। उपभोक्ताहरू कम्पनीहरू चाहन्छन्? जानकारी, बिक्री र विशेष; खुद्रा विक्रेताहरु लाई यो कसरी प्रभावकारी तिनीहरुलाई दिने सिक्नु पर्छ।
म असहमत छु कि "फेसबुक पसलहरू पुग्नको लागि उत्तम स्थान हो।" मलाई लाग्छ यो राम्रोसँग लेख्न सकिन्छ, "फेसबुक अहिले सम्ममा, सामाजिक नेटवर्कि influencedमा प्रभावित नेता र अहिलेसम्मको सब भन्दा ठूलो सामाजिक नेटवर्क हो। परिणाम स्वरूप, प्रभावमा आधारित खुद्रा बिक्री त्यहाँ राम्रो गर्छ। " १175 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताहरूसँग, निस्सन्देह कि फेसबुकमा शप्टरहरूको ठूलो प्रतिशत छ। त्यो भनेको जस्तै हो, "कार चलाउने व्यक्तिहरूले प्रत्येक महिना ग्यास किन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।" 🙂
मेरो विचारमा, उत्तम तरिका पुग्न खरीददारहरू तल हात, खोज इन्जिन यस पल्ट हो। म मेरो अर्को उद्देश्य अनुसन्धान गर्न फेसबुक जाने छैन र मेरो अभिप्राय कहिले पनि फेसबुक मा खरीद गर्ने छैन। जे होस्, जब मेरो उद्देश्य खरीद गर्नु हो - म प्रायः खोजी ईन्जिनहरूमा हिट गर्दछु।
त्यो भनियो, म फेसबुक मा उपभोक्ताहरु संग कनेक्ट गर्न व्यवसाय को लागी अवसर छुट छैन। यसको विपरित, यो मिडिया रिपोर्टले प्रमाणित गर्दछ उपभोक्ताहरू सामाजिक मिडिया मार्फत खुद्रा विक्रेताको साथ कनेक्ट हुन चाहन्छन्.
Respond१% उत्तरदाताहरूले भने कि उनीहरु १ देखि nds ब्रान्डहरुमा सामाजिक मिडिया मार्फत कुराकानी गर्छन्।
२१% उत्तरदाताहरूले भने कि उनीहरु सोशल मिडिया मार्फत to देखि १० ब्रान्डमा कुराकानी गर्छन्।
Ents% उत्तरदाताहरूले भने कि उनीहरु २००० भन्दा बढी ब्रान्डको साथ सामाजिक मिडिया मार्फत कुराकानी गर्छन्।
मैले त्यो भन्दा पहिले भनेको छु सामाजिक मिडिया व्यवसायको लागि एक एम्पलीफायर हो अनलाइन फेसबुक ठूलो एम्पलीफायर हो! यसका सदस्यहरूको अन्तरक्रियाशीलता र खरीद निर्णयहरू साझेदारी गर्ने क्षमता, अवश्य पनि एक राम्रो अवसर हो। विशेष गरी यदि तपाईंसँग जडान हुने प्रक्रिया छ र ती सदस्यहरूलाई प्रस्तावहरू राख्न।
टैग: ईमेल लागतईमेल मूल्य निर्धारणईमेल पठाउने लागतWordPress को लागी गुगल एनालिटिक्सगुगल वेबमास्टर उपकरणहरूसामाजिक मिडिया ड्यासबोर्डहरूटेलिभिजनतेरा डाटा
गुगल एनालाइटिक्सको साथ बहु वर्डप्रेस लेखक ट्र्याक गर्दै
अब यो जान्न रोचक हुनेछ कि यदि उपभोक्ताहरूले केहि अनलाइन खरीद गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, के तिनीहरू विशेष रूपमा अनलाइन जान्छन् त्यस वस्तुको लागि खोजी गर्न वा तिनीहरूले पहिले खोजी गर्नु अघि सामाजिक नेटवर्क साइटहरूमा समय खर्च गर्छन्। मलाई थाहा छ धेरै व्यक्तिको फेसबुक वा ट्विटर वा अन्य सामाजिक नेटवर्कि sites साइटहरू प्रयोग गर्ने बानी छ कि उनीहरूले इन्टरनेटमा केहि पनि गर्नु अघि।
यदि उपभोक्ताहरू सामान्यतया पहिले सामाजिक नेटवर्कि sites साइटहरू प्रयोग गर्दछन्, तब फोरसेको बयानसँग अलि अलि बढी वैधता छ।
ग्रेट पोस्ट डग। म कार / ग्यास सम्बन्धको बारे लाईन मन पराउँछु। तपाईं यस छलफलमा अनुप्रयोगहरू थप्न सक्नुहुनेछ। मानिससँग आईफोन छ अधिक अनुप्रयोगहरू। 🙂
खुल्लमखुल्ला रिटेल दृष्टिकोणबाट म शंका गर्दै छु कि त्यो धेरै ठूलो पाली हो र यसले धेरै धेरै अवसर प्रदान गर्दछ। म अमेजनको “फ्यान” हुन सक्छु तर मलाई थाहा छैन म तिनीहरूको फ्यानपेजमा फेरि फिर्ता भएको छु। म मेरो अमेजन अनुप्रयोगको साथ सबै समय किन्छु। म दक्षिण पश्चिम मन पराउँछु र उनीहरुलाई ट्विटरमा पछ्याउँदछु तर ध्यान दिएन। म मेरो दक्षिण पश्चिमी अनुप्रयोग सबै समयको साथ व्यस्त रहन्छु ... मैले भर्खर २० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै गरेको एउटा बैंकबाट स्विच गरें ... जसको फ्यान पृष्ठ छ र ​​म ट्विटरमा अनुसरण गर्न सक्दछु। मैले स्विच गरें किनकि चेससँग एउटा भयानक अनुप्रयोग थियो जुन म सबै भन्दा धेरै समयसँग संलग्न हुनेछु।